Xildhibaanadii ku geeriyooday weerarkii Hotelka Ambassador ayaa aas qaran loo sameeyey – STAR FM SOMALIA
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho aas Qaran loogu sameeyay labo Xildhibaan oo ka tirsanaa Baarlamaanka Somaliya, kuwaasi oo xalay lagu dilay weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen Hotelka Ambassador ee Magaalada Muqdisho.
Salaada Janaasada Marxuumiinta ayaa waxaa lagula tukaday masaajidka Madaxtooyada, waxaana Salaada ka qaybgalay Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka.
Intaasi kadib ayaa meydka waxaa loo galbiyay Qabuuraha Booliska, halkaasi oo aas qaran loogu sameeyay.
Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya iyo Saraakiil ciidanka Booliska ka tirsan ayaa ka qayb galay Aaska Qaran ee loo sameeyay Xiildhibaan C/laahi Jaamac Xuseen (Kabaweyne) iyo Xildhibaan Prof. Maxamuud Maxamed Guure.
Labadan Xildhibaan ayaa waxa ay ahaayeen saaxiibo, iyadoo Xildhibaan C/laahi Jaamac uu Hotelka u tagay inuu soo booqdo Xildhibaan Guure, hayeeshe masiibadan ay qabsatay.
Al Shabaab ayaa horay u dilay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya oo ku bartilmaameedsadeen Hotelo iyo goobo ka mid ah caasimada.